Chii chinonzi bonde positivism | Bezzia
Maria Jose Roldan | 14/09/2021 23:03 | Zvepabonde
Kunyangwe zvingaite senge nhema, Nhasi kuchine nzira refu yekuenda munzvimbo ine nharo sekuita bonde. Kusvikira makore mashoma apfuura, hukama hwepabonde uye hukama hwehukama hwakagara huripo uye kune vamwe vanhu bonde raingova nechinangwa kana chinangwa chimwe, icho chaive chimwe kunze kwekubereka kwevanhu. Neraki zvinhu zvakafambira mberi zvishoma uye zvatova zvakajairika kuona ungochani vakaroorana kana vakaroorana vanofarira bonde.
Zvepabonde positivism iri kuwedzera kusimbiswa munharaunda uye zvakanaka kuva nepfungwa dzakavhurika kana zvasvika kune nyika yebonde. Munyaya inotevera tichazotaura newe nenzira yakadzama nezve zvataurwa pamusoro apa nezvezvepabonde uye nzira yakanakisa yekuzviita.
1 Chii chinonzi bonde positivism?
2 Maitiro ekuisa pabonde positivism mukuita
Chii chinonzi bonde positivism?
Ichazvino chine vateveri vazhinji uye ichifunga nezvebonde sechimwe chinhu chinowanikwa mumunhu chinofanira kunakidzwa zvizere. Zvepabonde positivism inokurudzira kuve nemoyo murefu kana zvasvika pabonde uye kusafanirwa kuzvidzikisira mairi zvisinei nemitemo inogona kuiswa nechimwe chikamu chevanhu. Iwe unofanirwa kunakirwa nebonde zvizere uye uchisiya kumashure dzidziso dzenhema dzisingabatsire chero chinhu.
Zvinoenderana nezvinangwa zviri kutsvaga izvozvi, zvinotevera zvinofanirwa kuratidzwa:
Rusununguko uye kuremekedza zvine chekuita nezvese zvine chekuita nebonde.
Iwe unofanirwa kuve unoshivirira kune chero bonde tsika uye kwete kushoropodza mahara.
Tinofanira kuona kuti dzidzo ine chekuita nebonde ndeyechokwadi uye yakazara sezvazvinogona, yakasununguka kubva kune chero mhando yematehwe kana maitiro.
Maitiro ekuisa pabonde positivism mukuita
Kana zvasvika pakuisa iyi yazvino mukuita, kuva nemaonero akanaka pabonde kwakakosha. Iwe unofanirwa kutanga newe pachako uye kubvisa kusarura kwese kwaungave uine nezvebonde. Kubva pano, zvakanaka kuisa iyi positivism mukuita muhukama hwehukama.
Kuve nemafungire aya kune zvese zvakapoteredza bonde, Haisi basa riri nyore uye rinoda imwe nguva kuzviita. Kana iwe ukachinja maitiro ako uye wotanga kuona bonde kubva kune imwe maonero, shanduko inouya munzvimbo dzese uye kunakirwa padanho repabonde kuchave kwakanyanya.
Muchidimbu, zvakakosha kuti usiye taboos uye kushorwa pamusoro pebonde uye tanga kuva nepfungwa dzakashama kana zvasvika pazviri. Kuva nekumwe kusada nezve bonde uye dzidziso dzenhema pamusoro pazvo kunogona kukanganisa maitiro ehukama.
Kana, kune rumwe rutivi, munhu wacho aine pfungwa dzakavhurika kana zvasvika pabonde, zvichabatsira zvakanyanya kana uine hukama nevamwe vanhu. Izvo zvakakosha kuti chikamu chenharaunda yanhasi chitange kusimudzira zvepabonde positivism uye dzidza kuremekedza uye kushivirira zvese zvinotenderera pasirese pabonde.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Zvepabonde » Chii chinonzi bonde positivism